Naqshad Cajiib ah Sida Looga Hortagayo Xakamaynta Botnet
Isticmaalka botnets waa dhacdo cusub. Isticmaalkooda weerarrada tobankii sano ee ugu dambeeyay waxay sababeen waxyeelo badan oo loogu geystey dhibbanayaasha. Sidaa daraadeed, waxaa jira dadaal badan oo loo geysto ilaalinta khayaanada khayaanada botnet, ama xirida wadajir kasta oo suurtagal ah.
Ivan Konovalov, 10 Sibteem khabiir, ayaa sharaxaya in erayga botnet uu ka kooban yahay labo erey: Bot, taas oo loola jeedo kombiyuutarka fayruska, iyo Net kaas oo ah shabakado isku xiran oo isku xiran. Waa wax aan macquul aheyn dadku in ay horumariyaan oo ay xakameyaan xajinta si ay u shaqeeyaan kombuyuutarrada ay u diraan gacanta. Sidaas darteed, waxay keenaan isticmaalka baaskiilada si toos ah - miami beach yacht charters. Xakameyntu waxay isticmaashaa shabakad si ay ugu faafto kombiyuutarada kale.
Marka kombuyuutarkaagu uu ku dhaco nacasnimo iyo inuu noqdo qayb ka mid ah botnet, qofkii xukuma wuxuu samayn karaa geedi socodka taariikhda fog. Hawlahaas waxaa laga yaabaa inaanay muuqan dadka oo isticmaalaya bandwidth hoose hoose. Waxyaabaha ka soo horjeeda anti-malware waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo jiritaanka khayaanada. Haddii kale, dadka isticmaala tiknoolajiyada waxay eegi karaan barnaamijyada hadda socda ama lagu rakibay nidaamka.
Botnet waa hawsha qofka leh ujeeddo xun. Waxay leeyihiin dhowr isticmaalo sida dirista spam iyo xadista macluumaadka. Tirada "bots" ee ka mid ah hantidiisa waa, aad u muhiim ah dhaawaca ay keeni karaan. Tusaale ahaan, burcadbadeed abaabulan ayaa isticmaala baaskiilada si ay u xadaan macluumaadka maaliyadda si ay u sameeyaan khiyaamo, ama inay basaasaan dadka isticmaala waxyaabaha aan waxba galabsan iyo inay isticmaalaan macluumaadka sharci darada ah ee la helay si ay u jebiyaan
Guddiga amariga iyo maamulka wuxuu u shaqeeyaa sida barta asalka ah ee kombiyuutarada kale ku xiran yihiin shabakadda. Inta badan botnets, haddii taliska iyo xakamaynta kumbuyuutarku uu xiro, botnet oo dhan way burburtay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalado gaar ah. Marka ugu horeysa waa meesha bacbaarada loo isticmaalo isgaarsiinta asal-u-shaqeeye oo aan lahayn hannaan amar ah iyo maamul. Midda labaad waa botnets oo leh tiro ka badan hal talis iyo xakameyn kuyaal oo ku yaal waddamo kala duwan..Way adagtahay in la xakameeyo dhererka ku haboon sharaxaaddan
Khatarahaas oo kale in dadku ka baqayaan barnaamijyada xajinta ayaa sidoo kale khuseeya botnets. Weerarrada ugu caansan waa inay xadaan macluumaadka xasaasiga ah, siyaabo badan oo loo adeegsado server-yada iyaga oo doonaya in ay keenaan ama u diraan spam. Kombiyuutar cudurka qaba oo qayb ka ah botnet ma lahan mulkiilaha. Qofka weerarka gada ah wuxuu u shaqeeyaa sida badanna waxqabadyo sharci darro ah
Botnets waa halis u ah qalabka shirkadaha iyo shakhsiyaadka labadaba. Si kastaba ha ahaatee, aaladaha shirkaduhu waxay leeyihiin amni iyo ilaalin wanaagsan oo ilaalin ah. Waxay ku socotaa iyada oo aan sheegin inay heystaan ​​xog badan oo xasaasi ah si loo ilaaliyo
Koox gaar ah oo ka mid ah kuwa ugu nugul maaha kuwa kale. Nidaamka loo adeegsaday wuxuu qaadan karaa noocyo kala duwan iyadoo ku xiran kooxda la beegsanayo.
Qashinka ayaa ah kan ugu weyn ee loo yaqaan 'botnet' oo ku jira diiwaanka sida loo yaqaan "computer" si dhakhso ah. Si kastaba ha ahaatee, horumariyayaashu marnaba uma baahna inay isticmaalaan sababtoo ah feejignaanta sii kordhaysa iyo baaritaanka ay soo jiidatay bulshada cilmi-baarista. Kuwa kale waxaa ka mid ah Storm iyo TDSS
ESET ayaa dhowaan heshay botnet baaritaankooda Hawlgalka Windigo. Waxay ku dhacdey in ka badan 25,000 oo ah server. Ujeeddadiisu waxay ahayd in ay dib udhigto waxyaabaha xun ee kombuyuutarrada isticmaala, waxay xaddidaan aqoonsigooda, waxayna soo diraan farriimaha spam si ay ula xiriiraan kombiyuutarradaas.
Nidaam hal qalliinka ah ma aha mid ka badbaado weerarrada ay ka midka yihiin software xumo. Dadka isticmaala qalabyada Macriga waa kuwo aad u yaqaana faayillada Flashback.
Ka hortagga Boostooyinka
Barnaamijka ladagaallanka lidka ku ah bini-aadamka waa meel lagu bilaabi karo marka la dagaallamayo botnets. Aqoonsiga suurtagalka macquulka ah ee shabakada shabakada waa mid sahlan.
Inay kor u qaadaan wacyiga dadka oo baraan khatarta. Dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in kombiyuutarada cudurka qaba ay khatar ku yihiin naftooda iyo kuwa kaleba.
Dhamaan kombiyuutarada cudurka qaba oo isxoqa oo ku sameeya jeegareyn dhammaystiran ee dariiqyada si aad u hubiso inay nadiif yihiin.
Dadaalada iskaashiga ah ee dadka isticmaala, cilmi baarayaasha, ISPs, iyo masuuliyiinta.